देउवाले फोनबाट झ’पारेपछि कुद्दै बालुवाटार पुगे प्रचण्ड, के हो यथार्थ ? — Imandarmedia.com
देउवाले फोनबाट झ’पारेपछि कुद्दै बालुवाटार पुगे प्रचण्ड, के हो यथार्थ ?
काठमाडौ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भागमा पर्ने मन्त्रालयको टुङ्गो नलागेको भन्दै मन्त्रीको नाम दिन अस्वीकार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डसँग एक महिना अघिदेखि मन्त्रीहरुको लिष्ट मागेका थिए । तर प्रचण्डले मन्त्रालयको टुङ्गो नलागेसम्म मन्त्रीको नाम दिन अस्वीकार गरेका हुन् ।
आज विहान अति भएपछि देउवाले प्रचण्डलाई टेलिफोन गरी ‘मन्त्रीको नाम दिने की नदिने? भन्दै झपारेका थिए । त्यसपछि प्रचण्ड कुट्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड बालुवाटार पुगेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे छलफल गर्न प्रचण्ड केहीबेर अघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गएका हुन् ।माओवादीको केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक बस्नुअघि प्रचण्डले देउवालाई भेटेर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल गरेका हुन् ।
सरकारमा जाने मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लगाउन माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक आज दिउँसो १२ बजे पेरिसडाँडामा बस्दै छ ।प्रधानमन्त्री देउवा मन्त्रिपरिषद विस्तारको अन्तिम तयारीमा छन् । गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले अझैसम्म पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।
यसै गरि संसद् सचिवालयकी महिला कर्मचारीसँग लसपस गरेको अभियोग लागेका माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा पुनः राजनीतिमा सक्रिय हुन थालेका छन् ।पत्नी वियोगका कारण केही समयसम्म मौन बसेका महरा अहिले फेरि सक्रिय देखिन थालेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई साइजमा ल्याउन महरालाई पुनः सक्रिय बनाएका हुन् ।
अहिले श्रेष्ठलाई हटाएर महरालाई पार्टी प्रवक्ता बनाइएको छ । जसकारण माओवादी केन्द्रमा विवाद भुसको आगोझैं भित्रभित्रै फैलिसकेको छ । कुन दिन विस्फोट हुने हो ठेगान छैन ।नारायणकाजीलाई मन्त्री बन्नबाट रोक्न र पार्टीको नेतृत्व नदिन प्रचण्डले महरालाई मोहरा बनाएको नेताहरूबीच चर्चा छ । त्यही भएर नारायणकाजी असन्तुष्ट बनेका छन् ।
‘एमालेसँगको एकता बदर भएपछि नेकपाकालीन हजारौं कार्यकर्ता सम्पर्कमै नआएपछि प्रचण्ड तनावमा परेका छन् । त्यसमा पनि नारायणकाजीले कुन दिन माओवादी छाड्ने हो एकिन छैन,’ एक नेताले भने ।माओवादी केन्द्रमा प्रचण्डको उत्तराधिकारी बन्न एक दर्जन नेता आकांक्षी देखिएका छन् ।
नारायणकाजी, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, हरिबोल गजुरेल, देवेन्द्र पौडेल, देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, कृष्णबहादुर महरा नेतृत्वमा पुग्न चाहिरहेका छन् ।रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट र टोपबहादुर रायमाझी एमाले गएपछि नारायण्काजी, महरा, अग्निप्रसाद सापकोटा, जनार्दन र वर्षमान पुनमध्ये एक प्रचण्डको उत्तराधिकारीको दौडमा सामेल छन् ।
तर, प्रचण्ड भने अग्निप्रसाद र कृष्णबहादुरमध्ये एकलाई अघि सार्ने मनस्थितिमा रहेको बताइन्छ । सोही कारण अहिले जनार्दन र वर्षमान पुन खुमलटारसँग आगो भएको बुझिएको छ ।माओवादी केन्द्रमा देखिएको विवाद मंसिरमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रकट हुने स्रोतले बतायो ।
अब १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए एमालेमा फेरि संकटग्रस्त हुन्छः डा.भीम रावल
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डा। भीम रावलले १० बुँदे सहमतिको अक्षरशः कार्यान्वयन नभए पार्टी फेरि संकटग्रस्त हुने चेतावनी दिएका छन् । आसन्न विधान महाधिवेशनमा १० बुँदे अनुसार नै प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
आज बिहान नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता डा. रावलले भने, “१० बुँदे सहमतिको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।विधान महाधिवेशनमा पनि त्यसै अनुसार प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश होस् कि अन्य कुनै पनि ठाउँका नेता कार्यकर्तामाथि कुनै पनि अन्याय हुनुहुन्न ।
फेरि पनि एमालेमा भएका सहमति कार्यान्वयन नगर्ने, यो गुट वा त्यो गुट भन्ने, पार्टी एकता बँचाएको हिसाबकिताब नगर्ने हो भने पार्टी फेरि संकटग्रस्त हुने उनको भनाइ छ। उनले थपे, “सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज को हो भन्ने १० बुँदे सहमतिमै स्पष्ट भएको कुरा हो।
हामीले नीति, निर्णय, विधि, पद्धति र प्रणालीमा जोड दिएका छौं । पहिले म सुदूरपश्चिम प्रदेश समन्वय कमिटीको संयोजक थिएँ, एकीकरणपछि इन्चार्ज भएँ । २०७५ जेठ २ अगाडि जाने हो भने यसमा कुनै समस्या नै आउँदैन । आफूलाई जे मन लाग्यो, त्यही गर्ने छुट कसैलाई छैन।
१० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय कमिटीको अन्तर पार्टी निर्देशन- १२ कार्यान्वयन हुने आशा रहेको उनले बताए। उनले थपे, “केन्द्रीय कमिटीबाट जारी अपानि-१२ कार्यान्वयनमा जहाँ जहाँ समस्या देखिएका छन्, त्यहाँ त्यहाँ पूर्ण रुपमा पालना हुनुपर्छ ।विगतमा भएका कमीकमजोरीको पुनरावृत्ति हुनुहुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो । तर हिजोको बैठकमा हामी को इन्जार्च भन्ने विषयमा प्रवेश नै गरेनौं, छलफल पनि गरेनौं।
नेता डा। रावलले अमेरिका भन्दा अगाडि बढेर भक्तिभाव र दलाली गरी देशको स्वाभिमान कसैको पाउमा चढाउने प्रवृत्तिबाट आफू आश्चर्यचकित भएको पनि बताए ।उनले भने, “मलाई आश्चर्य लाग्छ, दुःख पनि लाग्छ । एमसीसीमा अमेरिका भन्दा अगाडि बढेर भक्तिभाव देखाउने क्रमले हामीले महाकाली सन्धिभन्दा ठूलो दुर्दशा भोग्नुपर्ने हुन सक्छ।